Yako Yemagariro Media Kushambadzira Isu Akaundi yeaya Maitiro? | Martech Zone
Iyi ndiyo imwe infographic yakakura kubva kuCJG Dhijitari Kushambadzira, 10 Yemagariro Media Kushambadzira Maitiro Ekutarisa Iyi 2015. Zvakakosha kuti uongorore zvemukati mako, zvemagariro uye nhare mbozha kuti uone kwaungave uine zvimwe zvipenga.
10 Yemagariro Media Kushambadzira Maitiro Ekutarisa Iyi 2015
Content Marketing inoramba ichiwedzera kuwanda kwevanhu.
Yechokwadi Nguva Yemagariro Media Kushambadzira ichava buzzword.
Audio neVhidhiyo ichatonga zvemukati mevanhu.
Pane inoenderera mberi, yakadzikama shanduko yakananga nharembozha yemagariro.
Yakabhadharwa Social Media Kushambadzira acharamba achisimuka.
Kubhadhara maficha uchishandisa Zvemagariro Media Wallets zviri kuenda zvakanyanya.
Kuwedzera kwe Zvemagariro Media Commerce inoenderera mberi.
Yemagariro Media Ongororo inoshanduka, ichigonesa kungwara kushambadzira midhiya.
Zvemagariro Midhiya uye iyo B2B Musika inowedzera.
Kuwedzera kwe Nyowani Yemagariro Networks.
Iyo infographic inonongedza kuti zvakavanzika uye zvekushambadzira nyaya zvinoramba zvichitsamwisa vashandisi uye zvinogona kuvhura iyo gedhi remamwe niche network… Ndinovimba zvakadaro! Ndichiri kushandisa Facebook mazuva ese, ndinoshuvira dai paine vamwe vakwikwidzi munzvimbo yemagariro enhau.
Zvakawanda se97% yevatengesi vanoshandisa vezvenhau, kusvika 92% vachibvuma kukosha kwechishandiso ichi kumabhizinesi avo. Izvi zvinotevera zvinopa muongororwo wemaitiro matsva, zvakakosha uye zvinhu zvekutarisa gore rinouya kuti ugone kuzvigadzirira pamwe nebhizinesi rako kune izvo zvakachengeterwa pasocial media muna 2015. Jomer Gregorio, CJG Digital Marketing
Tags: 2015b2bbuzzwordContent MarketingelloFacebookInstagramLinkedInnharembozha yemagarironyowani social networknhamba yemifananidzo pane snapchatnhamba yezvinyorwa pafacebooknhamba yevanoshandisa vezvenhaunhamba yekuisa kune tumblrakabhadharwa pasocial mediaPinterestzvakavanzikachaiyo-nguva yemagariro midhiyamagariro audiozvekutengeseranapasocial zvemukati kushambadziradata rezvemagarirokuunganidzwa kwedata remagarirokushambadzira kwevanhuevanhu vezvenhausocial media advertisingmagariro enhau analyticspasocial media buzzwordpasocial media commercepasocial media kushambadzira zanosocial media kubhadharapasocial media zvakavanzikazvemagariro vezvenhau zanomagariro enhau mafambiropasocial media walletsyemagariro vhidhiyotumblrmaawa evhikivhiki nevhiki nguva yekuzvipira kune vezvenhauyik yak